Gbasara anyị - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Otu n'ime ndị kasị mma ngwa ngwa prototyping emeputa ke China.The Best Uru OEM Rapid Prototyping Service maka R&D.
YuxinWright raara nye R&D na mmepụta nke ulo oru prototypes, na kọntinent itinye ihe elu n'ichepụta teknụzụ na innovations na ulo oru ahịa ina. Anyị ụlọ ọrụ bụ otu n'ime n'elu ulo oru mmepụta prototype emepụta na China na nwere ike asọmpi na esenidụt market.We-akwakọba ọgaranya ahụmahụ na nnyocha ubi nke high_precision nhazi technology maka ọhụrụ pụrụ iche ulo oru engineering ihe. Anyị na-enye ndị kachasị ọrụ ọrụ kachasị mma maka ndị ahịa anyị dị elu gụnyere ọrụ nke prototypes na ọtụtụ obere ogbe nke ngwa ngwa ngwa ngwa ahụ nwere akụkụ Auto, UAV drone, Electronics Consumer, Communication device, Civil Aviation akụkụ, Ngwaọrụ pụrụ iche, Ngwa ọgwụ. , Ngwaọrụ eletriki, Akụrụngwa ike ọhụụ, ụlọ ọrụ akpaaka wdg.
Kun shan Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd. na-enye ihe ahaziri ọrụnye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na nke ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Ulo oru di elu_end na emebere ulo ahia nwereina iche iche prototypes na obere ogbe akụkụ na multi_spec. Dịka usoro nhazi na ebumnuche, ma ọ bụ ahaziri ahaziri, ụdị ihe a chọrọ yana atụmatụ nke “multi_spec, obere ukwu, ogo dị elu na obere oge", Nke anyị kọwara dị ka"High_end pụrụ iche ina”. Maka iwu dị otu a, ọ na-esiri ike ịhazigharị usoro mmepụta ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, ma ọ dịkwa ike iru ogo chọrọ maka igwe igwe ọdịnala.
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala, anyị na-etinye uche na mmepụta na mmepụta maka mmepụta ihe mmepụta ihe ma na-etinye teknụzụ mmepụta ihe dị elu na ihe ọhụụ na ndị ahịa na-achọ. Kunshan Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd. bụ isi ụlọ ọrụprototype emeputaya na asọmpi mba ụwa siri ike. Anyị enwetawo ọtụtụ ahụmahụ nahigh_precision teknụzụ na ọhụrụ pụrụ iche ulo oru engineering ihe nnyocha ubi, na-enye ndị kasị kachasị ọrụ ngwọta maka na prototypes na ngwa ngwa mmepụta nke iche iche obere ogbe ina na high_grade costomers sitere na ngwaahịa 3C, ngwa ngwa ụgbọala, ngwa ngwa ngwa ọha / ngwa pụrụ iche, ngwa ọgwụ, ngwa eletriki, akụrụngwa ike ọhụrụ na ụlọ ọrụ akpaaka.
Kemgbe ụlọ ọrụ start_up, anyị gbara akaebe ma sonye na mmepe nke ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ngwa. Anyị na-etinye aka na-ewu ụlọ na-ewu ewu ngwa ngwa na nke kachasị elu na China, na-akwado ụlọ na ụwa niile "nnukwu ọkwa pụrụ iche" n'oge na ngwa ngwaya na imepụta awa 24 na-akwụsị akwụsị n'afọ niile.